अक्षय कुमारको पर्समा कसको फोटो ?
काठमाडौं । बलिउडका खेलाडी अक्षय कुमारले विभिन्न फिल्ममार्फत आफ्नो कलाकारिता र भिन्नताले दर्शकको मन जित्दै आएका छन् । उनका सबैजसो फिल्महरुले बक्स अफिसमा राम्रो कमाई गरिरहेका बेलामा उनको प्रेरणाका श्रोत आखिर को हुन् ? भन्ने प्रश्न पनि धेरैको मनमा उठेको हुन्छ । हाल अक्षय कुमार कमेडी शो ‘द ग्रेट इन्डियन लाफ्टर च्यालेन्ज’ शोमा व्यस्त रहेका छन् ।
यसै शोमा उनले आफ्नो प्रेरणा र आदर्श व्यक्तिका बारेमा पनि बताएका हुन् । आफूले सधैँ पर्समा उनको तस्बिर समेत राख्ने गरेको अक्षयले बताएका हुन् । उनका आदर्श व्यक्ति अरु कोहि नभई विश्वकै उत्कृष्ट कलाकार चार्ली च्याप्लीन भएको बताएका हुन् । महान मनोरञ्जनकर्ता मानिने चार्ली च्याप्लीन उनका आदर्श व्यक्ति हुन् र उनी सधैँ तिनको तस्बिर आफ्नो पर्समा राख्ने गरेको अक्षयले बताए ।
व्यक्तिगत रुपमै चार्ली च्याप्लीनका शब्दहरुमा विश्वास गर्ने गरेको अक्षयले बताए । चार्ली को भनाई ‘जीवनलाई नजिकबाट हेर्यो भने निकै ठूलो ट्रयाजिडी जस्तो लाग्छ तर टाढाबाट हेर्दा जीवन एउटा कमेडी जस्तो मात्र लाग्नेछ ’ ले अक्षयको जीवनमा राम्रो प्रभाव पारेको उनले बताएका हुन् ।